Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: December 2007
ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲရှိ ဦးဣဿရိယ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအထူး ဆိုးဝါးနေ
စက်တင်္ဘာလအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရဟန်းတော်များ ဆန္ဒပြပွဲများကို ဦးဆာင်ခဲ့သူ ဦးဣဿရိယ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ ဘူးသီးတောင် ထောင်ထဲတွင် အထူးဆိုးရွားနေကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ ဆွေမျိုး တဦးက “မိသားစုတွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရတဲ့အတွက် ဦးဇင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်နေတယ်ဆိ်ုတာကို ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေဟာ အထူး ဆိုးရွားနေတယ်လို့ ထောင်အတွင်းကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ သိရှိရပါတယ်။ ဦးဇင်းကို မတရားနှိပ်စက်ထားတဲ့ အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း တော်တော် ထိခိုက်နေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။” ဟု ပြော သည်။
ဦးဣဿရိယအား နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များက စစ်တွေမြို့မှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာစဉ် မောင်တောမြို့ မြို့မကျောင်းတိုက်တွင် အောက်တိုဘာလ ပထမပတ်က နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် ဦးဣဿရိယအား မောင်တောမြို့၌ လူဝတ်လဲပြီး စစ်တွေသို့ ပို့ဆောင်ကာ စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွင်း၌ပင် အာဏာပိုင်များက တဘက်သတ် တရားစီရင်ကာ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ခွဲချမှတ်ခဲ့သည်။
စစ်တွေထောင်တွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်း ဦးဣဿရိယအား စစ်ထောက်လှမ်း ရေးများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခဲ့သဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အထူးထိခိုက်ခဲ့ ကြောင်း ထောင်မှလွတ်လာသူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
တရားစီရင်ပြီးနောက်ပိုင်း ဦးဣဿရိယအား အာဏာပိုင်များက ဘူးသီးတောင် အကျဉ်း ထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းပြင်အာဏာပိုင်များက ဦးဇင်းအားသူ့ဆွေမျိုး မိသားစုများ နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။
ဦးဇင်း ဣဿရိယမှာ သက်တော် ၂၈ နှစ်ရှိပြီး စိတ္တသုခကျောင်းတွင် ရဟန်းဘ၀ဖြင့် ပညာသင်ကြားနေစဉ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအား စစ်တွေတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် စစ်အစိုးရမှ ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရပါ နှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်နေသဖြင့် ကျန်းမာရေးသာ ထိခိုက်နေသည်သာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း အထူးထိခိုက် ခံစားနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ နိရဉ္စရာမှ သတင်းများနှင့် ဓါတ်ပုံများအား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ နိရဉ္စရာ သတင်းရင်းမြစ်ကို ဖေါ်ပြပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။)
နေရဉ္စရာ သတင်းဌာန မှကူးယူထားပါသည်။
ကျနော်တို.ဟာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီး လူနည်းစုလူမျိုးများ မဟုတ် ဟု ချင်းခေါင်းဆောင်ပြောပြ
ဗမာပြည်ဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်၊ သမိုင်းတလျှောက်မှာ မြောက်များစွာသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကျနော်တို.ကို လူနည်းစုလူမျိုးများ ဟုဗမာလူမျိုးတွေခေါ်ကြသည်၊ကျနော်တို.ဟာ လူနည်းစုမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို.ဟာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ပါတယ် ဟု ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ.တွင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စကားဝိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဟောပြောစဉ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ ခေါင်းဆောင်တယောက်လဲဖြစ်၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ ဦးဆောင်မှုအဖွဲ.၀င်တယောက်လဲဖြစ် တဲ့ ဒေါက်တာ ဆူခါ က ပြောကြားသွားပါသည်၊
ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ “အလုပ်ဖြစ်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်“ တစ်ခုကို ပုံသေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ.၏ လက်ထောက်ကော်မရှင် ဖြစ်သူ Jose Martinez Cobo ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ “ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူအဖွဲ.အစည်းများ၊လူမျိုးများ၊ နှင့် နိုင်ငံများဆိုသည်မှာ၊ သူတို.နယ်နိမိတ်တွေအထဲမှာ ကြီးပွားခဲ့၍ သူတို.ကိုယ်ကိုတခြားလူအဖွဲ.အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်းနဲ. မတူကွဲပြားသည်ဟူသော ခံယူချက်ရှိပြီး ယနေ.အချိန်အထိ ၎င်းနယ်နိမိတ်တွေအထဲမှာ သို.မဟုတ် ၎င်း နယ်နိမိတ်၏တစိတ်တပိုင်းမှာလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သောကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုမခံမီကာလ နှင့် သိမ်းပိုက်မှုမခံမီကာလမှာ သမိုင်းအစဉ်အဆက်ရှိလာခဲ့တဲ့ လူမျိုးများကိုဆိုလိုသည်၊ ယနေ.ခေတ်ကာလမှာ လူအဖွဲ.အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သောလူမျိုးအဖြစ်တည်ရှိနေပြီး၊ သူတို.၏လူမျိုးများဆက်လက်ရှင်သန်မှုအခြေခံချက်များအရ နှင့် သူတို.၏ယဉ်ကျေးမှုထုံစံများ၊လူမှုရေးဓလေ့များ နှင့် တရားရေးဆိုင်ရာစနစ်များ နှင့်အညီ သူတို.၏လူမျိုးရေး လက္ခဏာ နှင့် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင်နယ်မြေများကို ကားကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊နှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအားလက်ကမ်းလွဲပြောင်းပေးရန်
ဒီလိုဖော်ပြချက်အရ ဗမာပြည်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်က သူတို.တိုင်းပြည်ရှိခဲ့တယ်၊ ကျနော်တို.ဟာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်တယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို လူနည်းစု ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းသည် ကျနော်တို.၏ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို ကန်.သတ်၊ချုပ်ချယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို.ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ.ကျ.နော်တို.ကို လူနည်းစုများအဖြစ် သူများ တံဆိပ်တပ်နေခြင်းကို ခွင့်မပြုရဘူး ဟု ဒေါက်တာ ဆူခါ က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်၊
လူနည်းစု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ဟု သူကဆက်လက်ပြောပြသည်၊ လူအဖွဲ.အစည်းပမာဏကြီးတိုင်းမှာ လူနည်းစုလူမျိုးများပါဝင်နေတယ်၊ သူတို.တတွေဟာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၊ နယ်မြေမဲ့သွားလာနေသော လူအဖွဲ.အစည်းများ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ တစ်ချို.နေရာတွေမှာ၊ လက်အောက်ခံ လူမျိုးစုများ အရေအတွက်အများစုပေါင်းစပ်ထားကောင်းပေါင်း စပ်ထားနိုင်တယ်၊ ဥပမာ၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့ တောင်အာဖရိကမှာ လူမည်းများဖြစ်ပါတယ်၊
ဗမာပြည်မှာဆိုရင်၊ တရုတ်လူမျိုးများ နှင့် အိန္ဒိလူမျိုးများသည်၊ လူနည်းစုလူမျိုးများ ဖြစ်ကြတယ်၊ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးစာတမ်းအရ၊ လူနည်းစုနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားဟာလုံးလုံးကိုကွဲပြားနေတယ်၊ လူနည်းစုအတွက်ရေးထားတဲ့ စာပိုဒ်တွေအထဲမှာ၊လူနည်းစုတို.၏ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာစကား၊ကိုးကွယ်မှုဘာသာရေး၊ နှင့်ပညာရေးတို.ကိုဖွံ.ဖြိုတိုးတက်ဖို.အခွင့်အရေးများကို ၎င်းက အသိအမှတ်ပြုထားပေမဲ့ တိုင်းပြည် နှင့် နယ်နိမိတ်များကိုတော့ မထည့်ထားဘူး၊ ဒါကြောင့်၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးများ နဲ.ခြားနားပါတယ်၊
စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်၊ ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအနေနဲ.၎င်းတို.၏ဆောင်ရွက်ချက်အထဲမှာ ဒီ ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအခွင့်အရေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို စဉ်းစားရမည်၊ကျနော်တို.အခွင့်အရေးများကို ကျနော်တို.တောင်းဆိုသည့်အခါ ဤကြေညာစာတမ်းကို ကျနော်တို. ရည်ညွန်းရပါလိမ်.မည်၊ ဟု သူကဆက်ပြောပါသည်၊
ကျနော်တို.အခွင့်အရေးများရှိပြီးသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို.အခွင့်အရေးများကို နအဖမှ ကျနော်တို.တောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့၊ ကျနော်တို.ဖိနှိပ်ခံနေရပြီး ကျနော်တို.၏အခွင့်အရေးများကိုလဲ လုယူသွားခံရတယ်၊ဒါကြောင့်မို.၊ သူတို.လုယူသွားတဲ့ ကျနော်တို.အခွင့်အရေးများကိုပြန်ပေးဖို. ကျနော်တို.တောင်းနေတာဖြစ်ပါသည်၊ ဟုသူ၏နောက်ဆုံးဟောပြောချက်မှာအဆုံသတ်ပြောကြားသွားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းဌာနမှာ Kwarn Lake ရေးသားထားတဲ့ Chin Leader: We are the indigenous, not ethnic minorities ဆောင်ပါးကို ဆီလျော်အောင် ကိုကီကီနီ
ကျနော်တို.ဟာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီး လူနည်းစုလူမျိုးများမဟုတ်၊
Chin leader: We are the indigenous, not ethnic minorities
By Kwarn Lake
"Burma isamulti racial country. Several ethnic indigenous groups have lived throughout history in Burma and the Burmans call us ethnic minority groups. We are not minorities, we are the indigenous”, said Dr. Sui Khar, one of leaders of ENC ( Ethnic Nationalities Council) and alsoaleading member of Chin National Front, while lecturing to the ethnic youth in the workshop organized on the Thai-Burma border on 17 December.
According to the definition of the Special Rapporteur of the Sub-Commission, Jose Martinez Cobo, who formulateda'working definition' of indigenous peoples, he said:
“Indigenous communities, peoples and nations are those which, havingahistorical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.”
“According to this statement, the ethnic groups in Burma have their own land since many centuries. We are the indigenous. By addressing the ethnic groups as minorities, they are limiting and restricting our rights. We, the indigenous, must not allow others to label us as minorities”, he added.
The definition of minority, he said, is as follows: Every large society contains ethnic minorities. They may be migrant, landless nomadic communities. In some places, subordinate ethnic groups may constituteanumerical majority, such as Blacks in South Africa under apartheid.
In Burma the Chinese and the Indians are minority groups. Under the UN Bill of Human Rights, the minority and the indigenous are completely different. In the articles for minority, it recognizes their rights to develop their own culture, language, religion, education but not including the land and territories and it is different from the rights of indigenous.
The legal indigenous rights was declared just overayear ago. "In order to buildagenuine federal union, the Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee (FCDCC) must consider this United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People in their work. We will also have to refer to this Declaration when we ask for our rights”, he said.
“From the SPDC, we are not demanding our rights because we already have them, but we are abused and our rights have been taken away from us. So now we are asking them to give these rights back to us”, he concluded at the end of the lecture.
ဗမာနယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကျပ်အတည်း
(Ashley South ရေးသားသည်၊ နေရှင်းသတင်စား၊)
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ရက်ရက်စက်စက်ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေခြင်းဟာ ဗမာပြည်မှာ ထိတ်လန်.ဖွယ်ကောင်းသော လူ.အခွင့်အရေး နှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို နိုင်ငံတကာအာရုံစိုက် မှုအောက်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။
ရန်ကုန်မြို.နှင့် တခြားမြို.တွေမှာ ရဟန်းသံဃာတော်များ နှင့် အရပ်သားများကို ဖမ်းဆီး၊သတ်ဖြတ်သည့်ပုံရိပ်လွှာတွေဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ပြည်သူလူထုတို.အား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေခဲ့သည်၊
နာလည်သဘောပေါက်ထားတာက နအဖ စစ်အစိုးရ ရဲ.လုပ်ရပ်တွေအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စက်ဆုပ်ရွ.ံရှာသောခံစားချက်သည် ရာစုနှစ်တ၀က်လောက် (၁၉၆၂နှစ်၊စစ်အာဏာသိမ်းပွဲကတည်က)ဗမာပြည်ကို လွဲမှားစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့သောစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို မာမာမတ်မတ် အရေးယူပေးဖို.တောင်းဆိုချက်ဆီး ဦးတည်သွားစေပါသည်၊
တိုင်းသူပြည်သားတို.၏ လူအခွင့်အရေး၊အရပ်သားအခွင့်အရေး နှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများကို ပိုးပြီးလေစားလာအောင် ဗမာစစ်အစိုးရအား ဘယ်လိုတိုက်တွန်းဖျောင်းဖျ ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ဟာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ.အစည်းများအတွက် စိန်ခေါ်ခံနေရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်၊
စစ်အစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမိုကရေစီဆီ တဖြည်းဖြည်းနဲ.ကူးပြောင်းသွားရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်စစ်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံပြောင်းစေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဤလိုအပ်ချက်တွေ ဟာအချေအတင်ဆွေးနွေးစရာများဖြစ်ပါတယ်၊ ရှင်းနေတဲ့အချက်တချက်ကတော့ ဗမာပြည်မှာ အပြောင်းအလဲလိုအပ်နေတယ် ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ မကြာမီပေါ့၊
ထိုအတောအတွင်း၌ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တော့ ဘာမှ သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ယ်ပြောင်းလဲမသွားပါဘူး၊ သူတို.အုပ်စုကတော့ ဗမာစစ်တပ်နှင့်ဗမာစစ်အစိုးရတို. ၏ဖိနှိပ်မှုတွေရယ်၊ တခါတလည်ကျတော့လဲ အစိုးရမဟုတ်သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းများ၏ဖိနှိပ်မှုတွေရယ် ဆက်လက်ခံစားနေရဆဲပါ၊
ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုး စုများ၏အခြေအနေအတွက်တော့အထူးခက်ခဲပါတယ်၊သူတို.တတွေဟာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲပဋ္ဋိပက္ခဒဏ်တွေရယ်၊ဆည်းမြောင်စသည့်ကြီးကျယ်သောဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်ရဲ.ခြိမ်းခြောက်မှုဒဏ်တွေရယ်၊သစ်တွေခုတ်လဲမှု၊မိုင်တွေတူးဖေါ်မှုစသည့်သဘာဝထုတ်ယူမှုကြောင့်လူနေထိုင်မှုဘ၀ထိခိုက်မှုဒဏ်တွေရယ်၊ ပြီတော့ သူတို.လယ်မြေတွေကိုစစ်အစိုးရနဲ.တခြာအာဏာရှိသူတို.၏သိမ်းယူမှုဒဏ်တွေကိုပါ ခံနေကြရပါတယ်၊
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ.၎င်းတို.၏ဆင်းရဲဒုက္ခများကို မမေ့ဖို.အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်၊ဒီကနေ.ဟာ ဗမာပြည်မှာပြည်တွင်းဒုက္ခသည် ၅၀၀ ၀၀၀ကျော်ကျော်ရှိပါတယ်၊သူတို.အ များစုဟာ ပြည်တွင်းမှာ အဆင်းရဲဆုံးနဲ.အဖိနှိပ်ခံရဆုံး လူမျိုးတွေအထဲမှာ အများအားဖြင့် ကရင်၊ကရင်နီ၊မွန်၊ရှမ်း လူမျိုးတွေ နှင့်တခြားသောလူနဲစုတွေဖြစ်ပါတယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည် စခန်းဆယ်ခုတွင်နေထိုင်နေသော ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၅၀ ၀၀၀ နှင့် (ဗမာပြည်မှအများစုဖြစ်သော) ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားပေါင်း နှစ်သန်းခန်.တိုကိုလဲ စိုးရိမ်းမိပါတယ်၊
မကြာမီရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ အစိုးရထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာလုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ.အစည်းများဖြင့်အကောင်အထည်ဖေါ်နေသည့် ပြည်တွင်းရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစီမံကိန်တွေကိုအလှူငွေထပ်ပေးမည် ဟူသောကတိက၀တ်ကို နုိုင်ငံတကာအလှူရှင်များက ဗမာပြည်အခြေအနေအပေါ်တုံ.ပြန်သွားပါသည်၊ ဤတုံ.ပြန်ချက်ဟာလုံးဝသင့်လျော်မှုရှိတဲ့တုံ.ပြန်ချက်ပါ၊ တခြားတူညီသည့် ဖွံ.ဖြိုးမှု နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုဖော်ပြနေသောနိုင်ငံများနဲ.စားယင်ဗမာပြည်ဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်နိုင်ငံခြားအကူအညီရရှိမှု အလွန်နဲပါတယ်၊ ဗမာပြည်မှာ ဆင်းရဲတဲ့ လူအုပ်စုတွေအတွက် ပစ်မှတ်ထားပြီး အကူအညီထပ်ပေးသင့်တယ် ဆိုတာကို ကျနော် ငြင်းခုံနေတာကြာလှပါပြီ၊ ၎င်းအကူအညီဟာ ဒေသဆိုင်ရာလူထုအခြေပြုအဖွဲ.အစည်းများ ကွန်ယက်နဲ.ဘဲဖြစ်စ် နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဌာန စသည့်သင့်လျော်တဲ့ အစိုးရ ဌာနတွေနဲ.ဘဲဖြစ်စ် လက်တွဲပြီးအကောင်အထည်ဖေါ်သင့်ပါတယ်၊
ထိုသော်ငြားလည်း၊ ဗမာပြည်ကိုပေးတဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီကတော့ အလဟဿသုညရလဒ်လှည့်ကွက်မဖြစ်သင့်ပါဘူး၊ ပြည်တွင်းရှိ ဒုက္ခရောက်နေသူများအား ပေးနေတဲ့အကူအညီကို နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့လူအုပ်စုတွေ၏ အသုံးစရိတ် လို. မထည့်တွက်သင့်ဘူး၊ ဗမာပြည်အရှေ.ပိုင်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရှိ ဒုက္ခသည်များ နှင့် ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့သူများအတွက်တော့ နိုင်ငံတကာအကာအကွယ် နှင့်အကူအညီတွေကို လိုအပ်နေဆဲပါ၊
သို.သော်လည်းဘဲ၊ ထိုင်နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခသည်တွေကို နှစ်ဆယ်စုနှစ်ကျော် ပံ့ပိုးကူညီနေပြီး ဗမာပြည်တွင် အိုးအိမ်မဲ့သူများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို နိုင်ငံတကာအာရုံစိုက်လာအောင် ညွန်းပြခဲ့သော အစိုးရမဟုတ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ.အစည်းများ အတွက်တော့ ဘဏ္ဍာငွေအကျပ်အတည်းတွေနဲ. အပြင်းအထန်ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်၊
Thailand Burma Border Consortium (TBBC) အဖွဲ.ဟာ ဗမာပြည်မှ အိုးအိမ်မဲ့သူများအတွက် အိုးအိမ် များနဲ.အစားအစာများကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အဓိကတာဝန်ရှိ အန်ဂျီအို အဖွဲ.ဖြစ်ပါတယ်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်တွင်၊တီဘီဘီစီနှင့်တခြားသောအန်ဂျီအိုတွေအနေနဲ. အမျိုးသမီးများ၊အလွှာစုံလူနဲစုများ နှင့် လက်ရွေစင်မဟုတ်သော လူစုများ အပိုင်းမှာ စခန်း၏ အုပ် ချုပ်မှုအရေးကို ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုးပြီး ကျယ်ပြန်.လာအောင် ဒုက္ခသည်အဖွဲ.အစည်းများ နဲ. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊
ယနေ.ဆိုရင် နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ.တွေက ”အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှု“ ဆိုတဲ့ စံနမူနာအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်၊ စခန်းတွင် ကိုယ်စားပြု သော အဖွဲ.အစည်းအသီးသီးကတော့ ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများဖြန်.ဝေမှု၊ နှင့် အုပ်ချုပ်မှု တွေအပေါ် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဆင့်အတန်တစ်ခုကို ခံစားနေရပြီး ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ဒုက္ခသည်အခြေအနေများတွင် သာမန် မ ဟုတ်သောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်၊ ထိုသော်ငြားလည်း၊ ၎င်းတို.အောင်မြင်မှုများသည်၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ.အန္တရာယ်ဆိုက်ရောက်နေပါတယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ရေရှည်ငွေကြေးပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ပေးနေတဲ့အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ဖြတ်တောက်ဖို.တီဘီဘီစီ အနေနဲ. ဖိအားပေခံနေရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုင်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည်များနဲ.လုပ်ဆောင်နေသောတီဘီဘီစီ နှင့် တခြားသောအန်ဂျီအိုတို.အား နှစ်ရှည်ကြာထောက်ပံ့ပေးလာခဲ့တဲ့ အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါတယ်၊တတိယနိုင်ငံသို.အခြေချနေထိုင်မှု ဆိုတဲ့ “ကြာရှည်ခံအဖြေ“ကိုဒုက္ခသည်ဦးရေအမြောက်အများ ခေါ်ဆောင်နေပါသဖြင့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း စခန်းတွေ ပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်၊ ထိုအတောအတွင်း၌၊ ဘာပဲဖြစ်စ်ပေါ့၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာသွားရောက်နေထိုင်ခွင့်ရဖို.ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ.ဘယ်လောက်ဘဲခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ထားစေကာမူ ထောင်နဲ.ချီသောလူတွေက နယ်စပ်ဒေသသို. လစဉ် စုရုံးရောက်ရှိလာနေတုန်ပဲ၊
ဗမာပြည်တွင်ပြည်တွင်းစစ်သည်၊ ၁၉၉၀ နှစ်နှောင်ပိုင်းမှာ နောက်ဆုံးအခန်သို.ရောက်သွားပါတယ်၊ နအဖနဲ.တိုက်နေဆဲဖြစ်သော ကျန်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အနည်းငယ်တို.ဟာ အလွန်ဆိုးရွားသော အခြေအနေနဲ.ရင်ဆိုင်နေရပြီး သူတို.ထိန်းချုပ်ထားသောနယ်မြေအောက်မှာနေထိုင်နေသည့် ပြည်သူလူထုတွေက ယခင်ကထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ဆိုက်ရောက်နေပါတယ်၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ လူသားချင်းအခြေအနေများ၊ ဗမာပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှအိုးအိမ်းမဲ့သူများ၊ နှင့် ဒုက္ခသည်များအား ကျနော်တို.၏ ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးကြပါ၊ နယ်စပ်မြေပေါ်က လူတွေရဲ့ ကြာရှည်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ပစ်ထားဖို.အချိန်မရောက်သေးဘူး၊၊
The brutal and ongoing suppression of the "saffron revolution" has refocused international attention on the appalling human rights and political situation in Burma.
. Civilised people have been shocked by the images of Buddhist monks and other civilians being arrested and killed in Rangoon and other cities.
Understandably, revulsion at the actions of the SPDC regime has led to calls for firm action to be taken against the generals who have mismanaged Burma for nearly halfacentury (since the military takeover of 1962).
The challenge facing the international community is how to persuade the junta to better respect the human, civil and political rights of citizens. Whether this requires reform of the military government - and some kind of gradual transition to democracy - oramore abrupt form of regime change is debatable. What is clear, however, is that Burma needs change - and soon.
In the meantime, for people in rural areas, not much has changed. Communities continue to be subject toarange of abuses committed by the Burmese military and government, and sometimes by armed non-state groups. The situation is especially difficult for ethnic people in areas affected by armed conflict, or who are threatened by the construction of large-scale infrastructure projects such as dams, and whose livelihoods have been undermined by natural resource extraction (logging and mining), or because their land has been confiscated by the army or other powerful actors.
It is of the utmost importance that the international community does not forget the plight of these people. Today in Burma, more than 500,000 internally displaced people (IDPs), most of whom come from the Karen, Karenni, Mon, Shan and other minority groups, are among the most oppressed and needy people in the country. Also of concern are 150,000 refugees living in ten camps in Thailand, as well as some two million migrant workers in the kingdom (most of whom also come from Burma).
In recent weeks, some international donors have responded to the situation in Burma by committing additional money to humanitarian projects inside the country, implemented by international and local agencies working in government-controlled areas. This is an entirely appropriate response. Burma receives much less foreign aid per capita than other countries with similar development and poverty indicators. I have long argued that more aid should be targeted at needy groups in Burma, and that assistance projects should be implemented in partnership with local civil society networks, and - where appropriate - with some state agencies, such as the departments of health and education.
However, foreign aid to Burma should not be seen asazero-sum game. Assistance to vulnerable groups inside the country should not be provided at the expense of communities in the border zones. Refugees and IDPs in eastern Burma and Thailand remain in need of international protection and assistance. However, the international NGOs which have for over two decades supplied the refugee camps in Thailand, and directed international awareness of the plight of IDPs in Burma, are currently experiencingaserious funding crisis.
The Thailand Burma Border Consortium (TBBC) is the main NGO responsible for providing food and shelter to displaced people from Burma. Over the past few years, the TBBC and other NGOs have worked with the refugee communities to ensureagreater degree of participation in the governance of the camps, on the part of women and various minority and non-elite groups.
Today, the refugee regime on the border stands as an example of "best practice": the various communities represented in the camps enjoyadegree of ownership over administration and the distribution of relief supplies, which is unusual in refugee situations around the world. However, these achievements are in danger of being undermined, as the TBBC is being forced to cut supplies to the refugee camps due toachronic lack of funding.
The donors who have for so many years supported the TBBC and other NGOs working with refugees along the Thailand border should continue to do so. With increasingly large numbers of refugees taking up the "durable solution" of resettlement in third countries, the camps may be closed withinadecade. In the meantime however, thousands of people still flock to the border every month - although the Thai authorities are making it increasingly difficult for them to gain access to the refugee camps.
Since the late 1990s, the civil war in Burma has entered its final stage. The few remaining armed groups still at war with the SPDC are facingadesperate situation, and the civilian populations living in areas under their influence or control are more vulnerable than ever. Given the dire humanitarian situation along the border, IDPs and refugees in and from Burma deserve our continued support. Now is not the time to abandon the long-suffering people of the borderlands.
Ashley South is the author of several books and reports on Burma.
(၆၉) နှစ်မြောက် ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးနေ.အတွက် ဗကသ ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်
စိတ်ဓါတ်ကျသောကမီးပူးလောင်နေသော မောင်သန်းရွှေ နဲ့ မရိုသားတဲ့မျက်လုံးအကြည့်နဲ.မောင်ရွှေမန်း တို.ရဲ.မျက်နှာများ တွေ.ရှိရ၊ မောင်အေး တစ်ယောက်မီဒီယာစင်ပေါ်မှာပျောက်နေ၊
နအဖ ပစ်ခတ်၍ ဒီကေဘီအေ စစ်သား(၅)ဦး ကျဆုံး
A Conversation With Alan Rabinowitz
Zoologist GivesaVoice to Big Cats in the Wilderness
Among zoologists, Alan Rabinowitz is known as the Indiana Jones of wildlife conservation. But he is actually more the Dag Hammarskjold of biology.
That is because Dr. Rabinowitz, executive director of science and exploration at the Wildlife Conservation Society, isakind of international diplomat for big cats — jaguars, leopards, pumas.
For 20 years, he has traveled the world, imploring the power elite of democracies and dictatorships to dedicate large parcels as reserves for these imperiled felines.
Rudy Washington/ The New York
Times, Alan Rabinowitz and Siber
tigers at the Bronx Zoo
In the 1980s, he persuaded the leaders of Belize to establish the world’s first jaguar preserve. More recently, this Brooklyn-born biologist prevailed on the junta in Myanmar to transform 8,400 square miles of forest into the Hukawng Valley Tiger Reserve.
Dr. Rabinowitz, 53, recounts his Burmese adventures inanew book, “Life in the Valley of Death: The Fight to Save Tigers in the Land of Guns, Gold and Greed” (Island Press). An edited version ofatwo-hour conversation in New York follows.
Q. With so many of the world’s animals in danger, why do you mostly advocate for big cats?
On the search for tigers in Burma's
Hu Kwang Valley
A. Because cats get to the human psyche. People love big cats. If I go toagovernment and say, “If you don’t do something quickly, you’re going to lose your tigers,” they listen. If I say, “You’re about to lose all your wolves,” they won’t care. But leopards, tigers, jaguars — people haveahuge admiration for them,
My real goal is to save large sections of pristine wilderness for all types of wildlife. One way to do that is to make sure that the top predators have enough safe territory to thrive in. Because big cats need so much territory, when you save them, you’re really saving whole ecosystems and you’re saving the other animals down on the food chain. This is what’s called the “apex predator strategy” in conservation.
The other thing I’ve seen is that no government, even if they are doingalot of development, wants to lose their big cats. Even when you’re talking to the most authoritarian of dictators, none of them wants to be the guy at the helm when the last of his country’s tigers go extinct.
Q. How doesaconservationist negotiate with dictators? Do you employ special strategies?
A. I don’t go in withaplan. I just talk from my heart. These guys, they are used to people coming to them with hidden agendas. I think they can see that I don’t have any other than the wildlife.
When I first went to Burma-Myanmar, for instance, there wasn’talot of trust there (laughs). I was told, “You don’t look likeascientist.” But the situation for the Burmese tiger was desperate. Between habitat destruction and hunting, they were almost gone. We did surveys, and inalot of areas where tigers were supposed to be, you saw none. I was pretty blunt about that.
Sometimes, personal things worked for me. In 2003, I was diagnosed withaslow-growing form of leukemia. Some of the toughest leaders in the Burmese military, they just couldn’t fathom why anyone with cancer was repeatedly coming to their country and going into the jungle when in their mind I should be meditating or havingamore easy life. “So what if I have cancer?” I told them. “The tigers still have to haveahome.” I think my personal situation helped win some trust.
Q. Because of gross human-rights violations, the military government of Myanmar is under economic sanctions from the United States. There are people who wonder how you could work with suchagovernment. What’s your answer?
A. Tigers have no control over what human governments they live under. If we’re going to draw lines on what is an acceptable political landscape for saving wildlife, where can we work? Wildlife always ends up takingaback seat to what’s going on among humans — always. If we’re going to save wildlife, I’ve got to give itafront seat. Nothing we do hurts the people of Burma.
But if I based conservation on what I considered moral subjectivity, I’d be doing the wildlife no favor. And we’d be virtually guaranteeing the extermination of tigers from Burma. They’ve been almost hunted out for their skins and for the traditional-medicine trade.
Q. How are the tigers faring since the preserve was established?
A. Tigers don’t come back so quickly. When you’re down to very low numbers, you have to getamale and female just even meeting. With so few, it’s not easy for them to find each other. Even when you get them meeting, the young stay with the female for about three years. She doesn’t breed again until those young leave her. So if the tigers are coming back, we won’t know it forafew more years.
For the meanwhile — since hunting has been banned and since we’ve started some economic development projects for the local people — there’s been an increase in the prey-species that tigers eat: wild pigs and sambar deer. We’ve set up “camera traps” on animal trails where you can photograph everything that passes. We haven’t seenalot of tigers yet.
Q. We understand that you’ve been trying to negotiate with the North Koreans to set upawildlife sanctuary.
A. In the Demilitarized Zone, yes. We think there arealot of animals in there. It’s forested. And because it’s so heavily fortified, there isn’t human settlement. We reached out to the North Koreans. We thought, why not make the DMZ intoapeace park?
We first approached the North Koreans years ago to try to study the Siberian tiger that migrates into there. They wouldn’t let any Americans in. We were able to get one British scientist to visit their capital city,abirdwatcher. They never allowed him out of the city. There’s no story to tell there.
Q. What originally drew you to conservation?
A. Asachild, I had this horrific stutter. In school, I was put in what was called the retarded classes. I was very angry that people couldn’t see past the stuttering. From the second grade on, I stopped talking, except to the little green turtle and the chameleon I kept at home.
Talking to the animals, I realized they had feelings. I didn’t know if they understood me. But I saw that they were exactly like me. They weren’t broken, but people mistreated them because they can’t communicate. I thought if these animals hadavoice, people wouldn’t be able to crush them and throw them away. When I wasachild, I promised the animals that if I ever got my voice back, I’d be their voice.
It makes me feel whole, knowing that I’m allowing more animals to live in this world. Every time I set upaprotected area, I feel I’m paying them back for helping me speak. When we got Hukawng established, I thought, all those turtles, otters and tigers, they now haveachance to live.
၂၀၀၇ နှစ်အမေရိကန်ဘာသာရေးသတင်းထိုက်တန်သူများဆုအတွက် မြန်မာရဟန်းသံဃာတော်များ ရွေးချယ်ခံရ
18 December 2007 07-0979
Myanmar monks named top US religion newsmakers in 2007
New York (ENI). Buddhist monks who led anti-government demonstrations in Myanmar (formerly Burma) have been selected as the top religion newsmakers of the year, inapoll of secular journalists who write about religion for media in the United States.
ကိုးကားတဲ့ သတင်း ENI NEWS
ကရင်ရွာသားများစပါးရိတ်သိမ်းခွင့်ကို နအဖစစ်အစိုးရ ကန်.သတ်
For more pictures of Boycott Beijin Olympic Click here
နအဖ၏ ကရင်လူထုတရပ်လုံးအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသား
လူငယ်များကွန်ဂရက် (SYCB) ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အမေရိကန် ပန်းပုဆရာက မင်းကိုနိုင် ရုပ်တု ထုလုပ်ဂုဏ်ပြု
ဧရာဝတီ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇
အမေရိကန် ပန်းပုဆရာ ဂျင်မ် မက်နာလိစ် (Jim McNalis) က သူ၏ နောက်ဆုံး ကြိုးပမ်းချက်အဖြစ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဝင်နေသူ မင်းကိုနိုင်၏ ကိုယ်တပိုင်းရုပ်တုကို ထုလုပ်ဂုဏ်ပြုပြီး လူကိုယ်တိုင် လက်ဆောင်ပေးရန် စဉ်းစားထားသည်။
သူ၏ ဖလော်ရီဒါရှိ စတူဒီယိုခန်းထဲ၌ ခရီးထွက်ရန် အိတ်များ၊ အထုပ်အပိုးများ ထုပ်ပိုးပြင်ဆင် နေဆဲတွင် မင်းကိုနိုင် ပြန်လည်အဖမ်းခံလိုက်ရကြောင်း မက်နာလိစ် ကြားလိုက်ရသည်။ အချိန်က ရန်ကုန်တွင် စက်တင်ဘာလ ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်လာတော့မည့် ကနဦးလှုပ်ရှားမှုကာလ ဖြစ်သည်။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်ကိုတော့ ရောက်အောင် ကျနော်သယ်သွားမယ်”ဟု မက် နာလိစ်က ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မင်းကိုနိုင်နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းများကို ပြောပြခဲ့သည်။ “ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့မိသားစုကတော့ ကြိုက်မှာပဲ။ ကျနော့်အနေနဲ့ တကယ့်သတ္တိခဲ လူသားတဦးကို ကျနော်ကြည်ညိုတဲ့အကြောင်း ပြလို့ရတာပေါ့” ဟုလည်း မက်နာလိစ်က ဆိုသည်။
အလားတူ ခေါင်းဆောင်အများစု၏ ပုံတူရုပ်တုများလည်း မက်နာလိစ် ဖန်တီးခဲ့ဖူးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကရင်ခေါင်းဆောင် ဘိုမြ၊ မန္တလေးမှ နုတ်ခမ်းမွေးညီအစ်ကို လူရွှင်တော်များ၏ ပုံများကို ထုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ သူက မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ရုပ်ပြောင် ကိုယ်တပိုင်းပုံကိုပင် ထုလုပ်ခဲ့ဖူးသေးသည်။
မက်နာလိစ်သည် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်လောကတွင် နာမည်ကြီး အနုပညာပစ္စည်းများ ဖန်တီးသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သူ၏ လုပ်အားနှင့် အနုပညာ ဖန်တီးမှုအများစုကို မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်သာ အားသွန်၍ တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။ မင်းကိုနိုင်ကဲ့သို့သော သူရဲကောင်းများက သူ့ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောပြခဲ့သည်။
မင်းကိုနိုင်ထံသို့ရေးသည့် သူ၏စာတွင် “လူသားတို့၏ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မြတ်မှုတန်ဖိုးဟု ကျနော်ရည်ညွှန်း ခေါ်ဆို လိုသည့် ထူးခြားထင်ရှားလှသည့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ကျနော့်အပေါ် အလေးပေး အာရုံထားခဲ့ကြသည့်အတွက် ၀မ်းသာ ရသလို ဂုဏ်လည်း ယူမိပါသည်” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့သည် အမှန်အတိုင်း ပြုမူကျင့်ကြံရပါမည်။ အမှန်တရားအတွက် စံနမူနာများ ဖြစ်ရပါမည်။ အချင်းချင်း အပြန် အလှန် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ရှိကြဖို့လိုပါသည်။ ကျနော်တို့၏ အရည်အချင်းများနှင့် ခွန်အားများကို တရားမျှတမှုနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော ကျနော်တို့၏ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ သုံးစွဲကြ ရန်လည်း ကျနော်တို့ကိုယ် ကျနော်တို့ တောင်းဆိုကြရပါလိမ့်မည်”ဟု လည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
မက်နာလိစ်က “ဤရုပ်တုကို မြန်မာပြည်သူတို့ကိုယ်စား သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှသော လုပ်ရပ်များအားလုံးအတွက် ထောက်ခံ ပံ့ပိုးမှုအဖြစ်၊ ကျနော်၏ ကြည်ညိုလေးစားမှု ပြယုဂ်အဖြစ် လက်ခံပါရန်”ဟု မင်းကိုနိုင်သို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သေးသည်။
“တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်တွင် ကျနော်တို့ ဆုံစည်းနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်” ဟုလည်း သူရေးခဲ့သည်။
“ဒီလို နေ့ရက်မျိုးက ဘယ်အချိန် ဖြစ်လာမှာလဲတော့ ကျနော်မသိပါဘူး” ဟု သူက ဧရာဝတီသို့ ပြောခဲ့သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရတဲ့ တနေ့ပေါ့”ဟုလည်း သူကမှန်းဆ၍ ပြောဆိုသွားသည်။
[Top]၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှ US Sculptor Honors Min Ko Naing ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
Yawdserk: We must return to Panglong
by admin — last modified 2007-12-13 04:33 (Shan Herald News Agency)
On7December, SHAN interviewed Col Yawdserk, Chairman of the Restoration Council of Shan State (RCSS) and Commander-in-Chief of the Shan State Army (SSA) South, at his base in Loi Taileng. The following are excerpts:
On the September crackdownBurma has been an ash-covered cinder foralong time. It only needs something to blow away the ashes so the flames are rekindled. The generals, by their brutal suppression, only managed to cover the cinder again with ashes, but if they think the fire has been doused, they are deadly wrong.
One significant result of the September incident is that the Burman democratic movements and the non-Burman ethnic nationalities have become more united. However, we are totally united only on the questions of the overthrow of SPDC and the restoration of democracy. We still need to work together harder on the question of federalism. Perhaps it should be put off until the SPDC relinquishes its power.
What the UN and its envoy Ibrahim Gambari should bear in mind is that the genesis of today’s Burma is Panglong (when Aung San signed treaty with non-Burmans in 1947 foraunion where each state would enjoy full autonomy, democracy and human rights). It was because the Burmese military could not swallow Panglong that all the present problems had started and have worsened each day. A new Burma cannot arise out of the ashes until and unless all those concerned return to Panglong.
The Military holding the country together?
That isavery mistaken view. You cannot hold the country together without the consent of the people. If they could hold it together, why did the people vote for the NLD, SNLD and others in 1990? What’s new in the upcoming annual RCSS meetingWe are going to include representatives of each village tract in the Council. The aim is 4-fold:
To report to the Council any excesses committed by members of the resistance
To propose development projects for their respective localities
To advise the Council
To participate in the decision making
ကြံ.ဖွတ်အဖွဲကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ တာဝန်ယူထားထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားအဖွဲ.အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကို တိုက်တွန်း၊
Geneva: Burma ’s ethnic nationalities representative urged the United Nations Security Council UNSC to brand Union Solidarity and Development Association (USDA) an organization establish and supported by Burma ’s ruling military junta State Peace and Development Council (SPDC) as state sponsored terrorist organization during the Sixth Session of United Nations Human Rights Council being held in Geneva .
ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။ (သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်မှ)
စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီးနောက် နိုင်ငံတကာဖိအား နှင့် ပြည်တွင်း၌ ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အခြေ အနေများက ဖန်လာနေသဖြင့် ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသည် ယနေည ၈ နာရီတွင် စစ်အုပ်ချူပ်ရေးရပ်စဲကြောင်း ကြေငြာ လိုက်ရသည်။
နောက်တနေ့ မနက်စောစော အိပ်ယာမှ နိုးလာသောအခါ ဇနီးသည်ကိုလည်း မတွေ့ သားသမီးမြေးများကို မ တွေ့၍ အိမ်ဂေဟာပြတင်းပေါက်မှ အပြင်ကို ကြည့်လိုက်သော အခါတွင်လည်း အိမ်တော်ဝန်းတ၀ိုက် အစောင့် များလည်း ရှင်းနေသည်၊ တိတ်ဆိတ်နေသည်၊ အိမ်တော်ဝန်းအပြင်ဘက် ခပ်ဝေးဝေးတွင်သာ ကားသံများ ဆူညံ စွာ ကြားနေရသည်၊
ရုတ်တရက် တယ်လီဖုန်းသံ ကျယ်လောင်စွာမြည်လာ၍ ကောက်ကိုင်လိုက်ရာ …….
“ဟဲလို ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးလားခင်ဗျာ ကျနော်ရွှေမန်းပါ နေကောင်းရဲ့လား”
“ကောင်းပါတယ် ဒါနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာတုံး ငါဘာမှနားမလည်နိုင်တော့ဘူး --- တယောက်မှလည်း မရှိတော့ဘူး”
“အခြေအနေကို ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ထိမ်းထားရင်ရသေးတယ်လို့ ဒါမှကျနော်တို့ ပြေးဖို့အတွက် ပြင် ဆင်ချိန်ရမှာလို့ အခုတော့ တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အားလုံးပြေးကုန်ကြပြီလေ”
“ဟေ့! မထင်တာတွေ အားလုံးဖြစ်ကုန်ပါကကောလား။ ဒါဆို မင်းနဲ့ငါ နှစ်ယောက်ထဲပဲ ကျန်တော့တာ ပေါ့ ဟုတ်လား”
“ဟင့်အင်း ---- ကျနော် ပီကင်း ကနေ ဆက်နေတာ”
မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုတွင် မြန်မာစစ်အရာရှိများပါဝင်ဟု တိုင်းရင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ ဆို
ခွန်အောင်မြတ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။(သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်မှ)
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ဘိန်းစိမ်းနှင့် ဘိန်းဖြူ အများအပြား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော်လည်း စစ်အရာရှိကြီးများ ပါဝင် ပတ်သက်နေ၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲ လျှိ့ဝှက်ထားခဲ့သည်ဟု တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့(မြန်မာနိုင်ငံ)က ယနေ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာ ၃တန်ခန့်ရှိပြီး ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ် သည်ဟု ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကာလတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင့်ငါးရာခန့် ရှိသည့် ယင်းမူးယစ်ဆေးများကို မြန်မာစစ်တပ်နှင့် မူးယစ်အဖွဲ့ က လွန်ခဲ့သည့်လ ၄ရက်နှင့် ၈ရက်နေ့တွင် ဆီဆိုင်မြို့နယ် လွယ်မောတောင် ထီတမ်းကျေးရွာအနီးရှိ ဘိန်းချက် စက်ရုံမှ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းစက်ရုံသည် မြန်မာစစ်အစိုးရထံ လက်နက်ချသွားသော ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(ရလ လဖ) အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌဟောင်းဖြစ်သူ ဦးချစ်မောင် ထိန်းချုပ်သည့် ဒေသတွင်တည်ရှိပြီး ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တွင် မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိများ ပါဝင်ပတ်သက် နေသည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြသည်။
ယင်းဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန်က ယခုလို သုံးသပ်သည်။
“ထန်းယန်းကျေးရွာရဲ့ အရှေ့ဖက် နည်းနည်းသွားကျမှာပေါ့ အဲဒီနေရာမှာက ထီတမ်းလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဘိန်းချက်စခန်းတခုမိတယ်လို့ ကျနော်တို့ အဲလိုမျိုးကြားရတယ်။ အဲလိုဟာကို ကျနော်တို့ ကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီဟာတွေဟာ သူတို့နဲ့ မပတ်သက်ရင် တခြားလူနဲ့ ပတ်သက်စရာ အ ကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျနော်တို့က ဒီလိုပဲသုံးသပ်တယ်။နောက်ထပ်တခုကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ စစ်တပ် အနေနဲ့ မပါဝင်လာဘူး ဆိုတာကလည်းပဲ ကျနော်တို့ ပြောလို့မရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မိနေတဲ့ နေရာနဲ့ အဲဒီ အမှတ် (၄၂၅) (၄၂၆) တပ်ရင်း ထိုင်တဲ့ နေရာက ငါးမိုင် ၀န်းကျင်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီတပ်နယ် အတောတွင်း အဲဒီပတ်လည်မှာပဲ ရှိနေတယ်ဆိုနေတဲ့ အချိန်ကျတော့ ဒါကို ကျနော်တို့ ကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီနေရာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးချက်တဲ့ စက်ရုံပေါ်လာနိုင်တာက အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ ဒေသခံ အာဏာပိုင်၊ နောက် အစိုးရတပ်တွေရော၊ ရဲတွေရော မပါဝင် မပတ်သက်လို့ ကတော့ အဲဒီနေရာမှာ လုပ်လို့ မရဘူးလို့ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုပဲ သုံးသပ်ပါတယ်။ ”
မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဘိန်းချက်စက်ရုံအစောင့် ထီတမ်းရွာသား ဦးပညာ (ခေါ်) တလော ဆိုသူကို ဖမ်းဆီး ထားပြီး စက်ရုံပိုင်ရှင်အဖြစ် ယူဆရသော ခွန်ချစ်အောင်( ဥက္ကဌဟောင်း ဦးချစ်မောင်၏ သား)မှာ တိမ်းရှောင်နေ ကြောင်းနှင့် လက်နက်ချ ရလလဖ ဥက္ကဌဟောင်း ဦးချစ်မောင်နှင့်သား ခွန်ချစ်အောင်တို့သည် အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ စစ်ဗျူဟာမှူး-ဗိုလ်မှူးကြီးမြ၀င်းကို လစဉ် ကျပ်သိန်း (၅၀) ၊ ဒေသခံ တပ်ရင်းများဖြစ်သည့် ခမရ(၄၂၅)နှင့် ခမရ (၄၂၆) တပ်ရင်းတို့ကို လစဉ် ကျပ်သိန်း (၃၀)စီ ပေးသွင်းနေရကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိ သည်။
ဦးချစ်မောင်အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် မေလအစောပိုင်းက ရလလဖ ဗဟိုဌာနချုပ် နောင်ထောင်ဝ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး နအဖထံ လက်နက်ချခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်က ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် မူးယစ်အဖွဲ့က ဘိန်းခင်း ၁၅၀ခန့်တွေ့ရှိ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ယခုဖမ်းဆီးရမှုကို ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
In Shanland: Behind Enemy Lines in Burma
Recently, I went into Burma to doastory with the Shan State Army,arebel group fighting the Burmese government. The government doesn’t allow any journalists into the country.
Behind Enemy Lines in Burma
They control the internet and citizens have to useathumb-print reader if they want to logon. They control the phones, mail, and cable TV. Basically the only news that can get in or out of Burma is by people crossing illegally, under the protection of one of the tribal armies.When I lived in the Muay Thai monastery, above Chiangrai, with Pra Kruh Baafew years ago, there werealot of Shan monks. Shan are even more religious than Thais and close to 100% of Shan boys will serve as monks at some point in their lives.
At that time, I discovered that I really liked the Shan people. They aren’tatribe in the sense of some of the other tribes I have written about. They are an ethnic minority, if you can call 10 million peopleaminority. They have had their own government and their own state for centuries. Originally they hadaShan king. Later, the country was divided into states with each state being ruled byaprince. That was still the system, going into World War II and after. The last princes were either murdered by the government, or forced to abandon Shan State in the 1960s.
They are incredibly intelligent people and school is the number one priority. Even in the face of the horrible atrocities committed against them, they struggle to findaway to send their children to school in Thailand or send them to monastery schools, where they can study with monks.
Most of the important leaders of the revolution are former monks. I hit it off well with the Shan soldiers and civilians.
I met Colonel Yawd Serk, the commander of the army, and he asked me to wear the uniform, and teach Kung Fu to the soldiers and teach English to the children at the school. There are nearly 1,000 students at the school.
Two hundred and fifty of them are orphans. Their parents were killed by the Burmese army. Some of them walked for months through the jungle to arrive at the army base and live in safety.
There are children as young as ten years old who made that journey alone, or carryingayounger brother or sister. There are others who had to make the horrific choice of leavingasmall sibling behind.Once they arrive at the base, in Loi Tailang, they are no longer in Burma and not yet in Thailand.
They are in Shanland, an island of freedom and Shan culture, surrounded by war. One of my friends at Loi Tailang, Kawn Wan, who group up in the orphanage and now teaches English and Kung Fu to the children said, “We have people. We have land. We haveagovernment. We have an army. We have everything exceptacountry.”
The Shan State is asking for recognition throughout the world, to be independent of Burma. “I you ask even the smallest children in the orphanage,” Said Kawn Wan, “He will tell you his greatest wish is just to go home.”
The people of Loi Tailang can’t go home until the war is over and Shanland is independent. And even then, with their villages burned, and their families murdered, what could they go home to? “Someday, we will be able to issue youavisa to Shanland.”
The Lieutenant told me.Staying with the Shan in the jungle made me realize how much I liked them. They had almost nothing, but they shared, always giving me the best food, the best sleeping place, and the warmest clothing. It is unfair that they held no passport, had no freedom, and that they had suffered so much.
I came back to Chiang Mai to write my stories and drop off my video tapes before going back up the mountain. I really missed the Shan when I was in town. I went back and my second trip was even better than the first.
I began concentrating on filming interviews with Shan people, recently arrived at Doi Tailang, documenting human rights abuses perpetrated by the SPDC, the Burmese Junta. The situation of the Shan people is so sad.
The Burmese government burns down whole villages. They rape the girls, murder the men, and take the boys to be in the army. They force villagers to work as porters, unpaid for periods of anywhere from twenty days toayear.
One man told me he had beenaforced porter,aslave, for four years. The porters are barely fed, frequently beaten, and when they collapse they are executed. The SPDC soldiers use Shan people as shields.
They stand behindaShan man, putagun over his shoulder, and march into battle. The Shan Army base has several thousand residents. It is likeasmall city withaschool,ahospital,atemple, shops, and restaurants.
It is the only place where villagers are safe. The children go to school and study their own language plus Thai, Burmese, and English.My new work partners when I am up there areagroup of about six guys who graduated fromaShan college in Thailand.
To even go there they had to sneak into Thailand illegally and hope that they were never discovered by immigration police. The nine month intensive course was taught all in English and open to the best and brightest of all of the tribes living in Shan State: including Lahu, Pa-O, and Shan.
The students had courses in world affairs, politics, and social studies. They knew more about the outside world than most Thai kids of the same age who lived under unrestricted freedom.
(Technically Thailand is also under martial law, but it isavery pusy version of martial law that doesn’t affect anything.)These kids are incredibly bright. In some ways, they lack maturity you would see in twenty year-olds in the west.
In other ways, they have seen so much and suffered so much, they have the wisdom ofaforty-one year old. (I just turned forty.) On this second visit to the Shan, I came up with the idea of doingavideo, interviewing refugees and having them tell their own story, on film. Most people in the west have never even heard of Shan State, so how can they put political pressure on Burma to grant them independence.
My new project is to doaseries of articles andavideo about the people of Doi Tailang, Shanland. It will tell their story, their sorrow, their joy, their hopes and dreams. I am donating all of the articles to any magazine or organization willing to print them, in order to raise awareness of this terrible situation.
I will also donate the video, when it is finished. I hoped it would be shown for free at organizations around the world, and that copies could be sold by mail order, with the proceeds going to support the school and orphan dormitories in Doi Tailang. Soso Whaley, of Moaning Dog productions, who has been helping produce my youtube videos, and David Lawlitts, of Two Guys from Brooklyn production, who worked with me on films abut the Akha and Karen tribes, are helping me to film and produce this video which I want to title, “A Life in Shan State.”
Basically, David and I are the field and film team in Asia. Soso is the American side, and will handle production, communication, mail, donors, and public relations.
We are completely self-funded on this one, as no major network has expressed any interest in the project. So, we need help. I think we could probably do the film for $3,000 - $4,000 USD. Everything we receive over $4,000 USD we will donate to the school and orphan dormitories at Loi Tailang.
If you have any idea of anyone we should contact for sponsorship, please let me know. Antonio is currently seeking donations to completeanon-commercial documentary film, entitled: “A Life in Shan State.”
If you wish to help, please contact Antonio@speakingadventure.comAntonio Graceffo is an adventure and martial arts author living in Asia. He is the Host of the web TV show, “Martial Arts Odyssey,”
The Pilot episode, shot in the Philippines, is running on youtube, click here. The Monk From Brooklyn - Kuntaw in the Phillipines Antonio is the author of four books available on amazon.com Contact him Antonio@speakingadventure.com see his website http://www.speakingadventure.com/ Checkout Antonio’s website http://speakingadventure.com/ Get Antonio’s books at amazon.com The Monk from Brooklyn Bikes, Boats, and Boxing Gloves The Desert of Death on Three Wheels Adventures in Formosa
မတူကွဲပြားမှုကိုစမ်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ပဋ္ဋိပက္ခတိုက်ပွဲ နှင့် နိုင်ငံတကာအရေးသို.ရောက်သွားတဲ့ ဗမာပြည်
Studying diversity, conflict and internationalizing Burma
The Union of Burma consists of7states and7administrative divisions. States are predominantly inhabited by minority ethnic groups while divisions are largely dominated by majority ethnic Burmans.
Burma gained independence with adopted name ‘Union of Burma’ in 1948 and later changed to Socialist Republic of the Union of Burma on 23rd September 1974, but reverted to the Union of Burma on 23rd September 1988. On 18th June 1989, the State Law and Order Restoration Council adoptedanew name called ‘Union of Myanmar’ with which the country is now officially known at the United Nations.
The country’s total land area is 261,970 square miles. Ethnic minorities occupy roughly two-thirds: Arakan/Rakhine state- 14,200 square miles, Chin state- 13,907 square miles, Kachin state- 34,379 square miles, Karen/Kayin state- 11,731 square miles, Karenni/Kayah state- 4,530 square miles, Mon state- 4,747.8 square miles, Shan state- 60,155 square miles.
As of July 2003 estimate, population according to the military is 52.4 million; last official census which occurred in 1983 reported just over 35 million (35,442,972). The same source puts religious affiliation in percent as: Buddhism (89.2%), Christianity (5.0%), Islam (3.8%), Hinduism (0.5%), Spiritualism (1.2%) and others (0.2%).
The military regime identifies “135 national races” of which the major ones are Arakan/Rakhine (7 sub-groups), Burman/Bamar (9 sub-groups), Chin (53 sub-groups), Kachin (12 sub-groups), Karen/Kayin (11 sub-groups), Karenni/Kayah (9 sub-groups), Mon (1 group), and Shan (33 sub-groups). The appellation “135 races” is codified on dialectical variations.
Although the accuracy is questionable, the 15th November 2007 update of the Central Intelligence Agency World Factbook gives ethnic composition in Burma as: Burman 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Chinese 3%, Indian 2%, Mon 2%, other 5%. Figures slightly vary from source to source.
Burma was administered asaprovince of India from 1886 until sundered from the British India in 1937. This was the year when settlements of the Kuki (also synonymously recorded in literature as Chin and Lushai) people were divvy up into two countries- Burma and India . With the creation of Bangladesh in 1972, the Kukis were further dispersed in three countries.
A number of research findings concluded that “Kookies” or “Kuki” isaBengali word meaning hill men or highlanders. These people haveatradition of passing on their history orally; and asaresult, today’s researchers have to rely substantially on the works of British writers who wrote extensively on the Kuki people during colonial era. Their traditional government ‘chieftainship system’ has been abandoned in Burma , but still retained and practiced in India .
In the context of Burma , Kuki is an unpopular terminology and so is the term Chin in India . The military junta recognizes “Thado” and “Kaung Saing Chin” under Chin nomenclature. In India , particularly in the state of Manipur, “Thado” is widely written as Thadou and “Kaung Saing” as Khongsai. The connotation may sound different, yet it refers to the same people. In local dialects, they also call themselves as eimi, laimi, zomi/mizo, etc.
Prior to independence, ethnic minority territories were not part of Burma proper. Considerable effort was mobilized for the materialization of Union of Burma at Panglong on the 12th day of February 1948. The nullification of this historic Panglong Agreement and 1947 constitution had annihilated the essence of forming the Union of Burma.
Burma hadaparliamentary democracy from 1948 till general Newin seized power in 1962. A broken promise of Panglong Agreement was one important factor that led to the rise of armed movements. Ethnic minorities’ demand is greater autonomy underafederated structure and not secession or disintegration.
Neither the bloodless coup of 1962 nor 1988 mass uprising was the root cause of today’s conflicts in Burma . As early as 1948, the Karen National Union under its armed wing Karen National Liberation Army had begun rebelling against the Burmese government.
The struggle in Burma is basically of2stages – restoration of democracy and rights of ethnic minorities. To attain the latter, the former has to come first. Any democratic set-up sidelining ethnic minorities would not bring an end to decades’ old political imbroglio.
Within the status quo states and divisions, there are sub-ethnic groups advocating for autonomy or separate administration. Although every demand of every sub-group may not be feasible, criteria for eligibility and legality need to be established. One should not expect the Union of Burma to remain forever7states and7divisions, or 8 states as envisaged by some.
For many years since independence, Burma political crisis remainedamicroscopic issue to the international community – either asaresult of the country’s insignificant role in international politics or her too little importance to the interest and security of other nations. However, this concept has changed dramatically since 1988 mass uprising and countrywide general elections.
Non-recognition of 1990 election results led to intimidation and imprisonment of several Member of Parliament elects – which became the genesis of many of the opposition groups in exile, including National Council of the Union of Burma and National Coalition Government of the Union of Burma.
Deadliest attack on the entourage of Aung San Suu Kyi at Depeyin in 2003 and her continued detention was one reason behind the passing of Burmese Freedom and Democracy Act of 2003 by the U.S. Congress. The act bans the import of Burmese products and freezes the assets of senior officials.
In recent years, Burma has attracted unprecedented attention of the international community. The successful placement of Burma situation as permanent agenda of the United Nations Security Council on 29th September 2006 wasahistoric moment. It was followed by an unsuccessful attempt to passaSecurity Council resolution on January 12th of this year.
More recently, the 2007 uprising incredibly got international community’s attention - headlines in many leading world newspapers, electronic medium and on television screens. Several world leaders and human rights activists around the world spoke up in support of Burmese democracy movement.
The entire world watched the brutality of military on its own people. The uprising immediate success was the attention it received from the world community and subsequent intervention by the United Nations Secretary General’s office through its special envoy Ibrahim Gambari.
The United States and European Union were quick to respond in taking tougher sanctions on the military generals and their businesses. Although there is no doubt about the powerful message it carries, unilateral sanctions seem to have limited impact. The vacuum created asaresult of western sanctions has been filled by Burma neighboring countries.
Only western sanctions without cooperation from neighboring Asian countries have given enough space for the army generals to move around. Conflicting interests of two different approaches will continue to prolong the survival of military regime at the depletion of the country’s natural resources and collateral environmental damage.
While western powers pursue stick diplomacy, the Asian powers opt for carrot. Under such circumstance, the U.N. special envoy’s mission has becomealittle more than lip services with no substantive results to follow. The adamant stance of the2veto wielding powers ( China and Russia ) of the Security Council makes the world’s highest enforcement agency bootless.
The removal of Burma ’s military regime could probably take less thanamonth or so. But unlike Iraq, the United States would not reign in its fighter jets and ground troops for reasons including: (i) Burma is insignificant importance to the U.S. national interest and security (ii) U.S. foreign policy toward Burma is more of policy oriented than strategic (iii) Rapidly advancing Asian super power is docking at the military’s backyard.
Though there is close to zero percent chance of military intervention either by the United States or by the United Nations, this would be the swiftest action to bring change to Burma should it be pursued. However, this would beanaïve prediction or suggestion for any political analyst at this point of time.
Meanwhile, the international community could consider the model ofasix party talks on North Korean nuclear standoff. Six parties involving the United States , European Union, ASEAN, China , India , and Burma could break the iceberg of political crisis. Due to geographical proximity, enormous economic and diplomatic influence over Burma , China ’s participation is pivotal.
If the international community continues to pursue two diametrically opposing views of western sanctions and Asian engagement, the military will continue to run the country with any resources available. Either concerted sanctions or collective engagement is needed to bring the military toanegotiating table.
Down the road, the culpable individuals in the military clique will be held accountable. Dayton Peace Accords of 1995 is one distant example that can be cited: carrot diplomacy brought warring parties to negotiation inawell devised plan.
However, stick diplomacy took its own course and the once powerful Serbian and Yugoslav president Slobodan Milosevic was tried for crimes at the International Criminal Tribunal in Hague , Netherlands .
On the death of Slobodan Milosevic in his detention cell, Richard Holbrooke, the then U.S. envoy who brokered the Dayton Peace Accords said, "I'm not going to shed any tears."
As usual, in the military operations, the SPDC troops regularly burn down villages, destroy the people’s orchards, plantations, harvests and rice barns - arrest, torture and execute innocent civilians - drive out the people from their homes and villages - loot properties and domestic animals such as cattle, pigs, hens etc. - extort cash, plant land mines in villages, forced people to live in concentration villages, commandeer trucks and bullock carts and forced thousands of people to work for them without pay.
ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၇
ကကျနော်တို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရူးကြောင်မူးကြောင်နိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကတော့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကြံခိုင်ရေးတွေကို ဘလော့ဂါသင်တန်းတွေပေးပြီးတော့၊ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ရေး ခိုင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလ မတိုင်ခင် အထိ ဘလော့ ဆိုတာကို ကြားဘူးနားဝ ရှိဘူးရုံကလွဲလို့လိုက်လဲမဖတ်ဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်လဲ ဘလော့မရှိပါဘူး။ အွန်လိုင်း အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဝေးတယ်ပဲပြောပြော၊ ကျနော် ဘလော့တွေ၊ ဘလော့ဂါတွေ နဲ့ က ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘီးလို ပါပဲခင်ဗျာ။
ဖြစ်ချင်တော့ စက်တင်ဘာ လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် က မြန်မာပြည်နဲ့ တော်တော်ဝေး ပြီး ၊ မြန်မာလူမျိုး တော်တော်နည်းတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ပဲ ဒီဘလော့ရဲ့ ပိုင်ရှင် ကိုရွှေဘိုသား က ကျနော် ကို စာရေးဖို အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တွန်းတဲ့ အတွက် ကျနော် ဒီဘလော့မှာ စာဝင်ရေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုဘလော့သွားလည်၊ ဒီဘလော့ သွားလည်၊ ဟို Tag၊ ဒီ Tag ဆိုတဲ့ ဘလော့ ယဉ်ကျေးမှုထဲ မှာတော့ ခုထိကျနော် ရှိမနေပါဘူး။ ရှိလာဖို့လည်း မရှိပါဘူး။
ကျနော်တွေ့မိတာတွေကို လူတွေကို ပြောပြချင်တဲ့အတွက် ဒီဘလော့မှာ ဆက်ရေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီတစ်စုံတစ်ယောက် ကျေးဇူးကြောင့်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားဘလော့ဂါတွေ၊ ဘလော့တွေအကြောင်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို့လိုက်လို့ နာမည်ကြီးလား၊ နာမည် မကြီးလား မသိပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့ ဘလော့ရေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ပို့စ် တခုကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြောစရာလေးတွေ နည်းနည်း ရှိလာတဲ့အတွက် ဘလော့ဆရာမ၊ ဘလော့ဆရာတွေ မေတ္တာပို့ ချင်ပို့ ပါစေတော့ အဲဒီလူနားထဲ ပြန်ရောက်စေ့ ချင်လို့ ဒီစာကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ပဲ အကောင်း မမြင်စိတ်များနေလို့လား၊ ဘာလားတော့ မသိဘူး၊ သူ့ပထမဆုံးစာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးနားလည်တာကတော့ တန်ဖိုးရှိတာလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတုန်း၊ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘလော့အကြောင်း ဟောပြောပေးဖို့ ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ အကြောင်းရေးထားတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာနေပြီး နအဖရဲ့ အာဏာစက်ကို ငြင်းဖို့ဆိုတာ တော် တန်ရုံလူအတွက် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့်၊ ဒါကို တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခု အနေနဲ့ တင်စားတာတော့ တော်တော်ကို ဆိုးဝါးတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဒုတိယအပိုဒ်ကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘလော့ရေး ဖို့အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ ဘယ်လောက်ရင်းထားရတယ် ဆိုတာကို ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီထဲ မှာ စိတ်မကြေလည် စရာကောင်းတဲစာပိုဒ်ကတော့ “အခု ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ အရေးအခင်းမှာ နာမည်အကြီးဆုံးက မြန်မာဘလော့ဂ်တွေပဲ။ နိုင်ငံခြားက လူတွေကလည်း တကယ်ကို ဂုဏ်ပြုချင်တာလား၊ မတာလား၊ မစာနာတာလား မသိဘူး စောက်သရမ်းတွေ ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်လိုက်ကြတာနဲ့ သိပ်မကြာခင်ဘဲ ဘလော့ဂ်ကို ပိတ်ထည့်လိုက် ပါတော့တယ်။”
တာဝန်ကျေတဲ့ ဘလော့ရေးသားသူ အချို့ကို ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက် သူသုံးထားတဲ့ အခြေအနေရောက်သည်အထိ ချီးမွမ်းတယ် ဆိုတာတော့ ကျနော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခု က အဲဒါတွေကြောင့် ဘလော့တွေ ပိတ်လိုက်တယ် ဆိုတာလဲ အတွေးတိမ်လွန် တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ နအဖ ဟာ သူတို့ အကြောင်း အမှန်ရေးတဲ့ ဘယ် Mediaကိုမဆို တားဖို့ ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်သတင်းဌာနတွေကိုလည်း တားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘလော့သင်တန်းမှာ ပါဝင်ပို့ချသူတွေကတော့ သောင်းစုငြိမ်း၊ ရဲမြတ်သူ၊ ဦးကိုကို ဆိုတဲ့ နအဖနဲ့ အကျိုးစီးပွားတူ ပညာရှင်တွေရယ်၊ ဘလော့ရေးတဲ့ ဇော်မိုးအောင်၊ ညီလင်းဆက်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ အသိပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာတစ်ဖက်က ကြည့်ရင်၊ ရိုးရိုးသားသား ထုတ်ဖော်ပြောတယ်လို့ တွေးလို့ ရပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အားနဲ့ ထောင်းလို့ ရတာပေါ့ ဗျာ။ သူများထောင်းတာ ခံရရင် ပိုနာမှာပေါ့။
ဝန်ထမ်းတွေကို အစိုးရအောက်ကလူတွေမို့ ဘလော့ဂ် သင်မပေး ဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်း လျှောက်လွှဲချက် ပေးထားတာပါ။ ဒါကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဝန်းထမ်းတိုင်းဟာ နအဖဘက်ကလူ မဟုတ်ဘဲ၊ အမှန်တွေ ရေးလာနိုင်တယ်။ မကျေနပ်ချက်တွေကို နာမည်အရင်းနဲ့ မဟုတ်တောင၊် တခြားဘလော့နာမည်တစ်ခုနဲ့ ရေးးလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိ ကျနော်လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ... နအဖဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့် ပယောဂတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မပါစေချင်ဘူး။ အဲလိုမပါအောင် နေနိုင်တာလဲ တော်လှန်ရေး တစ်မျိုးပါပဲ။
အဲဒီမှာ သင်တန်းသွားပေးတဲ့လူတွေ မသွားနိုင်လို့ နအဖရဲ့ ဘလော့သင်တန်းကြီး လုံးဝပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဘလော့ရေးတဲ့ လူအကုန်က သင်တန်းပေးဖို့ ငြင်းဆန်လိုက်ရင် ပြည်ပကပညာရှင်တွေကို နအဖက ငွေပေးခေါ်ပြီးသင်မှာပဲ။
နောက်ဆုံး အဲဒီအတွက် ပိုက်ဆံမသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင၊် စွေစောင်းကို ခေါ်သင်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ ခင်ဗျားအကြောင်းပြချက်က သိပ်တော့ မခိုင်လုံသေးဘူး၊ ကိုယ့် ဆရာရဲ့။ သာကီနွယ် လို့ ဘလော့တွေ ထပ်ပေါ်လာရင်၊ ခင်ဗျားကြောင့် မဟုတ်ပေမယ့်၊ ခင်ဗျားတို့ဟာ ပင်နယံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ဘယ်လိုမှ ငြင်းချက်ထုတ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ။
အဲလို ဘလော့တွေပေါ်လာလို့လဲ လူတွေက အမှန်နဲ့အမှား မခွဲနိုင်လောက်အောင် မညံ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မျက်စိတော့ နောက်တာပေါ့ ... ကိုယ့်ဆရာရယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာ အရမ်းအားနည်းတယ်လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားသူငယ်ချင်းက ပြောဖူးတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အိုင်တီ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာပြည်ကို ယိုးဒယားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလို့ ... ထင်နေတုန်းပဲ။ ပြောချင်တာက ဘလော့ဂ်တွေ အများကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။”
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ မီဒီယာအရမ်းအားနည်းတဲ့ကိစ္စကို ဘလော့တွေများလာခြင်းဆိုတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ကုစားလို့ မရပါဘူး။ လူဦးရေ သန်း ၆၀ လောက်ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဘလော့ဝင်ကြည့်တဲ့လူ တစ်နေ့ ခြောက်ထောင်ရှိသလား ... စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
နောက် ... တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူ သန်း ခြောက်ထောင်ထဲမှာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးပါဆိုတဲ့ ဘလော့ကို တစ်ရက် ခြောက် သိန်းလောက် ဝင်ကြည့်နေတာမျိုး ရှိပါသလား။ ကျနော်တော့ ရှိလိမ့်မယ် မထင်ဘူး ။ သူ့ ကောက်ချက်အတိုင်းသာ ဘလော့တွေ ကြောင့် သတင်းတွေပျံ့နိုင်မယ်ဆိုရင် - BBC , NHK, CNN က ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ပြုတ်တာ ကြာရော့မယ်။
နောက်တစ်ချက် ... မြန်မာပြည်ကို အိန္ဒိယက အိုင်တီမန်နေဂျာက ယိုးဒယားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ထင်တယ် ဆိုတာလဲ သိပ် အံသြစရာ မကောင်းပါဘူး။ ကျနော်လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံဆို မီဒီယာအင်အားလည်း ကောင်းတယ်၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လည်း ရှိပါတယ်။ နောက် ... ငွေကြေးချမ်းသာပြီး၊ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီနိုင်ငံကိုလာရမယ်ဆိုမှ ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်း သိတာပါ။ အဲဒီ ကုလားမန်နေဂျာတစ်ယောက် မသိတာနဲ့ တော့ ဘလော့တွေ များလာဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်က နည်းနည်းရယ်ချင်စရာ ကောင်းလွန်းပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျနော်တို့ ဘလော့တွေအများကြီးရေးရင်ရော၊ အဲဒီကုလားက မြန်မာပြည်ဟာ စစ်ဖိနပ်အောက်က အင်မတန် သနားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုတာ သိလာပါ့မလား။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အဲလိုလူတွေ သိစေချင်ရင် Wikipedia နဲ့Encarta နှစ်ခု ကို ညွှန်းလိုက်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မီဒီယာတွေ ဘယ်လောက်များများ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်မရှိသေးသမျှ အမှန်တရားဆိုတာတွေကို ဖော်ပြလို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ညီလင်းဆက်ရဲ့ ပိုစ်က ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ဘာဆိုလိုချင်မှန်း မသိပေမယ့် မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘလော့ပြန်ပွင့်ပေးမလားလို့ သူကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ ဆိုချင်ဟန်တူပါတယ်။ ဘလော့ပြန်မဖွင့်လို့ကျနော်တို့ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျော်လို့၊့ ခွလို့ ရမယ့်နည်းတွေလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ ဘလော့ရေးတဲ့လူတွေ သတင်းတို့၊့ဆောင်းပါးတို့ ရေးချင်ရင်လည်း အပြင်က ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေဆီပို့၊ အဲဒီလူတွေက ပိုစ့်တွေတင်ပေးမယ်လို့၊ ကျနော်တော့ ယုံကြည်တယ်။
ဘလော့ရေးပြီး နာမည်တည်ဆောက်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက်တော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ ငါစာ၊ ငါ့ဘလော့မှာပဲ တင်မယ်ဆိုတဲ့ ဆရာမတွေ၊ ဆရာတွေ အတွက်တော့ မပြောလိုပါဘူး။ နအဖက ဘလော့တွေကို ပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ ဗမာပြည်ထဲက သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ နိုင်ငံတကာကို မတင်ပြနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်က တွေးဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ပါ။
နောက် ... ဘလော့တွေ ရေးသားခွင့် ရပေမယ့်၊ ပြည်ပကဘလော့တွေကို ကြည့်ခွင့်မပေးဘူး ဆိုရင်လည်း ဘာမှမထူးပါဘူး။ ”အဲဒီနာမည်နဲ့ ဘလော့ဖွင့်ရင် ... ဆွဲစေ့မယ်လို့” ပြောထားရင် စာရေးတဲ့ ညီလင်းဆက်ကိုယ်တိုင်တောင် မဖွင့်ရဲပါဘူးလို့ ဝန်ခံထားပြီးဖြစ်တာကို ထောက်ရင်၊ သူတို့ဖက်ကလူတွေ တန်ပြန်ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်၊ ရေးဖို့သက်သက် ဖွင့်ပေးတာမျိုးကတော့ ဘာမှ ထူးခြားလာမယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဘလော့ရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့၊ ဘာတို့ စတဲ့လက်ချာတွေကို သင်ယူထားတဲ၊့ ပြည်တွင်းနအဖဘလော့ဂါ အင်အားစုကလည်း တဖြေးဖြေး၊ တိုးတိုး လာတော့မယ် ထင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘလော့ရေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်အဆာပြေအောင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေရေးမှ၊ ဘာမှ၊ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့မှာဆို နိုင်ငံရေး တစ်လုံးတစ်လေမှ ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က တစ်ခုထဲပါ။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ၊ ဘလော့ဆရာ ညီလင်းဆက်၊ ဇော်မိုးအောင်တို့ကို အားကျပြီး၊ ဝန်ထမ်းတွေတို့၊့ ကြံ့ဖွတ်တွေတို့ကို ဘလော့ရေးနည်း သင်တန်းပို့ချပေးမှာ စိုးရိမ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လူတိုင်း တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့၊ နအဖကို ဆန့်ကျင်ဖို့ မတောင်းဆိုပါဘူး။ နအဖရဲ့လမ်းစဉ်ကို သဘောကျလို့ ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ ကြိုက်တာလုပ်ပါ။ နောက်မှ ပြည်သူနဲ့ စာရင်းရှင်းတာပေါ့ဗျာ။
နအဖကိုလည်း မကြိုက်ပေမယ့်၊ တော်လှန်ရေးမှာ ပါဖို့ အခြေအနေမပေးတဲ့ လူတွေကိုလဲ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နအဖကို ထောက်ခံလား၊ မထောက်ခံလား ကိုယ့်ဟာကို အရင်ဆုံး တွေးစေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားတို့အဖြေက မကြိုက်ဘူး ဆိုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ နအဖနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကင်းအောင်နေတာဟာလဲ တော်လှန်ရေးကို ကူညီရာရောက်တယ် ဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။
(ညီလင်းဆက် ရဲ့ မူရင်းပိုစ့် ကို http://nyilynnseck.blogspot.com/2007/11/blog-post_08.html ဖတ်လို့ ရပါတယ်)
Sittwe: Burmese military authorities in Arakan State have been widely referring to monks with the nickname "orange", rather than using the appropriate term, said one monk from Sittwe.
"The authorities now call us 'orange', and no longer officially call us 'monks' in Arakan State, and it is an extreme insult to our religion," the monk said.
He gave as an example of how the nickname is being used by saying that if three monks were to travel from Buthidaung to Sittwe by ferry, the authorities would refer to them as 'three orange' traveling to Buthidaung.
Ashin Inda Shaka from the western Burmese border area said that it is part ofagovernment plan to destroy the monks' image in Burma, and to devalue their status in the eyes of the Burmese people.
သတင်း STATEMENT, သတင်း။ News
ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲရှိ ဦးဣဿရိယ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအ...
ကျနော်တို.ဟာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီး လူနည်းစ...
ဗမာနယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကျပ်အတည်း.(Ashley Sout...
(၆၉) နှစ်မြောက် ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးနေ.အတွက် ဗကသ ...
စိတ်ဓါတ်ကျသောကမီးပူးလောင်နေသော မောင်သန်းရွှေ နဲ့ မရ...
နအဖ ပစ်ခတ်၍ ဒီကေဘီအေ စစ်သား(၅)ဦး ကျဆုံးကာအိုဝါအို...
December 18, 2007A Conversation With Alan Rabinowi...
ကရင်ရွာသားများစပါးရိတ်သိမ်းခွင့်ကို နအဖစစ်အစိုးရ က...
For more pictures of Boycott Beijin Olympic Click ...
နအဖ၏ ကရင်လူထုတရပ်လုံးအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းနှင့် ပ...
အမေရိကန် ပန်းပုဆရာက မင်းကိုနိုင် ရုပ်တု ထုလုပ်ဂုဏ်...
Yawdserk: We must return to Panglongby admin — las...
ကြံ.ဖွတ်အဖွဲကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ တာဝန်ယူထားထောက်ပ...
နောက်ကျတဲ့ခြေတောက်သစ္စာဖောက်.ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၀၇ ...
ဗမာပြည်တွင် ရန်သူနယ်စပ်နောက်ကွယ်မှာ In Shanland: ...
မတူကွဲပြားမှုကိုစမ်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ပဋ္ဋိပက္ခတိုက်ပွဲ ...
ဘလော့ရေးသူများသို. ...့ မိုးထက်နေ (မိုးမခမှကူးယူေ...
ဗမာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ရဟန်းသံဃာတော်များကို နေ...
Myanmar woes raise fears of new migration to Thail...
နအဖစစ်တပ်နှင့် လားဟူပြည်သူ့စစ် နယ်လှည့်စစ်ကြောင်း ...
နအဖမှ ကထိန်ပွဲ ပိုက်ဆံကောက် ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက် မီးက...
အမှတ်(၆)စစ်ဆင်ရေး ဗျူရိုဦးစီးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇေ...
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် နအဖတပ်တို့ တ...
မွန်ပြည်နယ်ရဲအရာရှိကြီးများ လာဘ်စားမှုဖြင့် စစ်ဆေးခ...
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များမှ (၈၇)နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ....
သွေးထွက်သံယိုမှု နောက်တစ်ခုအတွက် မြန်မာရဟန်းသံဃာတေ...
လူငယ်စကားဝိုင်း ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းမှ No.01 - 1...